Chess Inovhura Inofamba: YeTenzi Tatu Ekutanga Matanho Ekutanga - Payette Pamberi - Mageeks
haikwanise kugadzirisa maapps pane ipad
ndeapi macustomer marongero ekuvandudza pane iphone
sei yangu iphone yekugadzirisa
Chess kuvhura inoreva ekutanga akati wandei mafambiro akaitwa mune chero yakapihwa chess mutambo, uye woitora kubva kune wepasirese tenzi - izvo zvinofambisa zvine basa. Ini nguva pfupi yadarika ndakave nemufaro wekubata pamwe chete Chess TV's Amateur Hour naI IM Danny Rensch, panguva iyo Danny akandipa tsananguro yekuvhundutsa pfungwa iyo yakajekesa izvo zvakakosha kumashure kweshess kuvhura mafambiro.
Muchinyorwa chino, ini ndinoshandisa ruzivo rwandakawana kubva kuna Danny kutsanangura izvo zvese zvakanaka kuvhura zvakafanana uye iyo epamusoro kiyi misimboti iyo inoita yakanaka chinzvimbo mune chess saka unogona kutanga kuhwina mimwe mitambo.
Ichi chinyorwa chakanyorwa neamateur, asi zvirimo mukati zvinouya zvakananga kubva kune tenzi wepasi rese . Kana iwe uri mudzidzi seni, ndinovimba chinyorwa ichi chiri zvimwe inobatsira kupfuura iyo iwe yaunoverenga, nekuti yakanyorwa nemumwe munhu ari kudzidza idzi pfungwa kekutanga nguva. Hapana ruzivo rwuri mukati meichi chinyorwa maonero angu - chakasimba, chakakosha zivo yandakadzidziswa naMIM Danny Rensch.
Tichatarisa Sei Aya Maitiro Ekuvhura Chess Anotambwa - Kwete Kungoyeuchidza
Mazhinji amateurs, ini pachangu ndakabatanidza, vakabata nemusoro ekutanga mashoma anozivikanwa ekuvhura mafambiro mu chess (e4 kana d4 yechena, e5 kana c5 yevatema), asi isu hatizive sei tinovaridza. Zvakanaka kana usina kubata nemusoro chero kufamba zvachose!
Zvinenge zvese zvimwe zvinyorwa zvinotarisa chii kuvhura kunofamba kuita, asi kubata nemusoro mafambiro kwaive kusiri kundibatsira kunatsiridza mutambo wangu wechess nekuti ini ndanga ndisinganzwisise pfungwa dzepasi.
chishongedzo ichi hachina kutsigirwa
Ichi chinyorwa chichatarisa iwo mazano anoshanda kune ese akanaka chess kuvhura mafambiro. Kunyangwe iwe urikutamba mutambo neshamwari kana kuongorora imwe yemitambo yaMagnus Carlsen (mukwikwidzi wepasirese wenyika), iwe unozotanga kunzwisisa sei varikutamba mafambiro ekuvhura ivo ari - kwete chete maitiro ekutevedzera.
Iyo Yekutanga Chess Kuvhura Sarudzo Ini Handina kumbobvira Ndadzidza
Danny akati, 'Kunyangwe kana vatambi vepamusoro vachitamba kuvhura iwe usingazive, vanoita zvinhu zvawakadzidziswa kuita pakutanga kwechesi.' (Ndakanga ndisati ndambodzidziswa zvinhu izvi.)
Hezvino zvinhu zvakakosha izvo masters vanowanzoita mukuvhura:
Ivo buritsa zvidimbu zvavo kurwira kutonga pamusoro pepakati pebhodhi . Zvisinei nekuvhura kuri kutambwa, ndiwo musoro wenyaya uyo usingambochinja .
Maitiro, kana iyo nzira ivo vanoda kudzora pakati ndizvo zvinoshanduka .
Zano: Kana mumwe munhu akatanga kutamba nhevedzano yezvishamiso inofamba kuti utange mutambo, iwe unofanirwa kungo tora kutonga pamusoro pepakati pebhodhi uye ' wega zvese. ”
Chess Kuvhura Kufamba Kunopokana
Paunenge uchifunga nezve chess kuvhurika, funga nezvekufamba kwega kwega sekupokana. Ngatifambei nemuenzaniso.
Nei Nhema Inotamba c5 (Iyo Sicilian Dziviriro) Mushure meWhite Plays e4
Mumwe munhu anotamba e4, iyo yakajairika kuvhura kufamba mune chess.
Nhema inotamba c5 mukupindura. (Inozivikanwa sekudzivirirwa kweSicilian.)
c5 inoridzwa nekuti nhema iri kuedza kurwisa nzvimbo dzakasviba.
Icho chinhu chine musoro kuita, nekuti chena chave nacho overextended pamakona emwenje, uye izvo zvinoita kuti d4 isimbe.
Ndosaka vatema vachipindura nec5 kana e5 mushure mee4: kupokana nenzvimbo yebhodhi iyo parizvino isina kupikiswa .
Iko Hakuna Chinotsiva Ichi Chimwe Chinhu
Iko hakuna kure kutenderedza izvi: Iwe unofanirwa kudzidza kumwe kwekutanga kwekuvhura mafambiro anokurudzirwa nenhamba uye nezvakamboitwa nevanhu kare.
Ndingaite Sei Ini Kudzidza Kwekutanga Kuvhura Mafambiro?
Nzira huru yekuita izvi kushandisa iyo Kuvhura Explorer pane Chess.com! Nenzira iyo, iwe unotanga kuvaka iyo 'yakavhurika yekufambisa mhasuru.' Danny akati kana iwe ukaita izvi, kutanga iwe unozoona kuti wakanganisa mune ekutanga mafambiro, asi pasina nguva ichave iri kufamba 5, uyezve kufamba 10.
Mune mamwe mazwi, kudzidza kwekutanga kuvhura mafambiro kunobatsira iwe kuti ufambire mberi .
Iyo Yekutanga Core Concepts Yeyese Chess Kuvhura
Chero nguva chero munhu paanofamba, iwe uri kuwana kutonga uye kurasikirwa nekudzora pamusoro pedzimwe nzvimbo dzinonetsa dzebhodhi.
Sewe kutanga, iwe unoda kutanga kunzwisisa chinokonzera uye mhedzisiro mu chess. Ndiyo chess vhezheni yacho, 'Kune chiito chese chiitiko chakaenzana uye chakapesana.'
Kufamba kwese kunofanirwa kutora mukana weimwe:
Chinhu chisina njodzi yekutora kana kuchengetedzwa zvishoma pane zvazvinofanira kuve
Kufamba kuenda uko zvidimbu zvako zvingave nemukana wekushanda pamwe chete
Zvishandiso Kuti Udzidze Zviri nani Kuvhura
Chandinofarira chepamhepo chepamhepo chekudzidza chess kuvhurika ndeye Chess.com yekuvhura muongorori, iyo inosanganisirwa neyekutanga nhengo yeChess.com.
Ndingakurudzira kuverenga chinyorwa changu nezve iyo rudyi nzira yekushandisa Chess.com yekuvhura muongorori usati wanyura mukati. Kuti uve akatendeseka, zvakavhiringidza kubvunda kwandiri pakutanga. Pandakaudza IM Danny Rensch nezvekuti ndanga ndichizvishandisa sei, akati ndanga ndichifunga nezvazvo 'zvisizvo.'
yangu iphone 5c haibhadharise
Zano raakandipa pamhepo rakagadzira zvinhu zvakawanda zvakajeka kwandiri, uye ndosaka ndakafunga kunyora chinyorwa nezve mashandisiro acho.
Kuvhura Kwakanaka Kunotungamira Kune Akanaka Nzvimbo
Kana usati watove, verenga yangu yekutevera-nyaya yakadanwa 3 Mazano Ekutora Yakanaka Nzvimbo Mune Chess: Maitiro Ekuhwina Kune Vatangi! kumhanyisa maitiro ako ekudzidza uye kutanga kuhwina mimwe mitambo.
Kuvhara Ichi Chinyorwa Nezve Chess Kuvhura
Chinangwa changu seamateur uye anoshuvira chess mudzidzi kugona kujekesa dzimwe pfungwa dzakakosha dzinofanira kubatsira chero munhu kuvandudza mutambo wavo wechess. Chengetedza mazano aya nezvekuti ungatambe sei yakasimba chess kuvhura inofamba pamberi pepfungwa dzako, uye une chokwadi chekutanga kuvandudza yako chess mutambo. Inzwa wakasununguka kundidenha kumutambo paChess.com - zita rangu rekushandisa nderekubhadhara kumberi, uye ugovana chinyorwa ichi neshamwari dzako!